सरकार ढल्यो, अब कसले ल्याउँछ बजेट ? - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका २९ बैशाख २०७८, 9:22 am
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया चलिरहेका बेला सरकार ढलेसँगै अब बजेट कसरी आउला भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बजेट लेखन चलिरहेकै बेला सोमबार संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास गुमाएका छन् । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेकी छिन् । अबको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा बजेट कसले ल्याउँछ भन्ने चासो बढेको छ ।
अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक बर्षको संशोधित बजेटभन्दा बढी हुने बताउँदै आएका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नुपर्ने लगायतका कारण बजेटको आकार बढ्ने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यो कुल विनियोजनको करिब ९१.१९ प्रतिशत हो । गत जेठमा सरकारले तत्कालीन सङ्घीय संसदमा पेश गरेको बजेट भने १४ खर्ब ४६ अर्ब थियो ।
तोकिएको मितिमा काँग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरुले बहुमतको दाबी गरे भने बैशाख ३० गते नै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछन् र केहीदिनमै नयाँ अर्थमन्त्री पनि आउने छन् । कथंकाल दलहरुले नयाँ सरकार बनाउन सकेनन् भने सोही रात राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार केपी ओलीलाई ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अर्को सम्भावना छ । यदि ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री भए भने विष्णु पौडेललाई नै अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेर जेठ १५ मा बजेट ल्याउने सम्भावना रहन्छ ।